Flash disks bụ kasị mkpa draịva na i nwere ike na-echekwa gị faịlụ. Flash draịva na-obere na obere size otú ị pụrụ ibu tinyere na gị na i nwere ike iji ya n'ebe ọ bụla. Flash draịva nwere dị iche iche Ikike na-ekwe ka ị na-azọpụta gị data faịlụ. Otú ọ dị, i nwere ike ịnyawapụ data faịlụ mgbe ị Ọkpụkpọ a disk ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ Nwela emerụ. Iji zọpụta a dị mkpa faịlụ site na a rụrụ arụ faịlụ mkpa ka ị kwụsị iji flash draịva ebe i nwere ike overwrite na ya. Ọzọkwa anya n'ihi na a data mgbake ngwá ọrụ nke ga ịtụte gị data n'enweghị.
Ihe ahụ pụrụ ịkpata emerụ Flash Drive
Ikpe nke rụrụ arụ flash draịva na-juru ebe nile na draịva. Flash draịva emebi na ebe a bụ kasị nkịtị ihe.
1. Virus na Malware agha
E nwere dị iche iche nke na virus na-ọgụ anyị kọmputa flash draịva na draịvụ ike. Ha na-emekarị na-anyị ngwaọrụ site na Internet ma ọ bụ rụrụ arụ faịlụ. Mgbe ha ga-esi n'ime flash draịva ha agaghị anụ ahụ mmebi ị data ma ọ ga-imebi ọdịnaya na gị flash mbanye.
2. nwedịrị ike ịta Removal
Mgbe iji draịvụ ike gị hụ na ị na idaputa ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Mgbe ị na-efego ya na kọmputa gị na ị na-ebufe data omume idaputa ya n'enweghị na kọmputa gị. Na Mac pịa iwu + E igodo. Mgbe ị na-iwepụ ụda flash mbanye ka na-enyefe data ị ga-emesị imebi faịlụ N'ihi ya, ndị flash mbanye Nwela emerụ.
3. Oke okpomọkụ.
Zere ibute gị flash mbanye na gburugburu ebe obibi ihe dị ka okpomọkụ na oyi na-atụ. Ọ bụghị naanị okpomọkụ ma ndị ọzọ na ihe ndị dị ka mmiri. Mgbe ndị a gburugburu ebe obibi ihe-esi na flash mbanye ha imebi cell N'ihi ya na-eduga na ọnwụ nke data.
4. Arọ ojiji
E nwere otu ihe na i mgbe mara na flash mbanye. Mgbe ị na-eji ya maka a ogologo oge nke oge ọ na-doro eyi na dọkatụrụ adọka. Nke a ogologo oge ojiji ga-eme ka gị faịlụ ida njigide ọnụego. Nke a pụtara na ọ ga-underperform na ị ga-atụfu data na ya. Iji a flash mbanye mgbe ruo ogologo oge na-eme ka nke a.
5. Nkịtị mmebi
Ụzọ ị aka draịva nwere ike na-akpata ire ure nke flash draịva. Ụfọdụ ndị na-eme na-ebu flash draịva ha akpa. I nwekwara ike dobe gị flash disk ma n'ụzọ anụ ahụ oge izu. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị-agbaji ya ahu so esighi ike n'ihi ya na-ebibi gị flash mbanye. Ọ bụrụ na ị na-ebu gị flash mbanye hụ na ọ nwere okpu na na-na ya nke ọma. Mgbe niile ịkpachara anya na otú ị-elekọta gị flash draịva. Na-emeso dị ka a siri ihe ebe ọ bụ na e dere gị ọnụ. I nwere ike ịbụ kechioma na ị flash mbanye mebiri emebi ma ọ ka nwere ike-ghọtara na kọmputa na ị chọrọ iji naghachi faịlụ na ya. Nke a kwesịrị ime ka ị imeli a ọnụ ọchị na ihu gị ebe ọ bụ na i nwere ike iji uche-na-afụ software akpọ Wondershare Data Recovery i nwere ike iji nke a software irrespective nke sistemụ ị na-eji. Windows na Mac version dị njikere maka gị download. Ya-enye gị naghachi dị iche iche faịlụ dị ka vidiyo, audios, foto, na ihe oyiyi si gị flash mbanye, kọmputa, na ọbụna ebe nchekwa kaadị. Mma nke a software bụ ụzọ e mere ya na anọ mgbake ụdịdị na naputa niile furu efu data.
1. Lost Data mgbake mode, Nke a mode-enye gị ohere naghachi furu efu faịlụ ma site nhichapụ ma ọ bụ rụrụ arụ faịlụ.
2. Raw data mgbake mode, a mode revives gị niile data na flash mbanye na-enweghị mbụ ha aha na ụzọ. Ọ bụ mgbe ikpeazụ nhọrọ iji mgbe nkebi mode na efu File mgbake mode na-ewute gị.
3. nkebi Iweghachite mode, a mode ga-ele anya maka niile data furu efu ruru partitioning, resizing na ọbụna ehichapụ faịlụ.
4 Wubàtá Iweghachite, na ihe omume a na ị bidoro a mgbake mgbe ahụ ị kwụsịtụ, ị ga-eji nke a mode ịnọgide na ya.
Na na kwuru ka anyị hụ otú iji nke a software. Download na ẹkedori ya na kọmputa gị. Mgbe ahụ efego gị mebiri emebi flash mbanye na kọmputa.
Nzọụkwụ 1 Chọpụta a Data mgbake nhọrọ
Mgbe ị mepee software anọ mgbake mode ga-egosi na usoro. Amalite ịzụta na iji Lost File mgbake mode.
Nzọụkwụ 2 Malite scanning
Tupu ị malite ịgụ isiokwu ị kwesịrị ị na mata ị na ụgbọala na họrọ faịlụ na ụdị na-gbakee. N'ihi na nke a ikpe m nzọ ị ga-mkpa gị niile faịlụ ka-natara. Pịa na All Files akara ngosi. Iji nweta a miri emi scanning nke faịlụ pịa Kwado Deep iṅomi nhọrọ. Si n'ebe-aga n'elu aka ekpe na pịa iṅomi.
Nzọụkwụ 3 Save natara faịlụ
Mgbe scanning usoro bụ zuru ezu ị ike ihuchalu on ihe e gbakee. Nke a bụ ọdabara faịlụ na photos. Àgwà nke faịlụ natara na-egosipụta. Wee họrọ niile faịlụ na ị chọrọ na pịa naghachi. Họrọ otu mpụga nchekwa ịzọpụta gị faịlụ.
Otú ndozi eleghara Flash Drive
N'ọnọdụ ụfọdụ flash mbanye nwere ike ghara ịdị na-egosi na kọmputa gị. Ị ga-mkpa idozi ya mbụ. On Mac aga Finder> Ngwa> Utilities. Site n'ebe pịa on Disk Utilities. Gaa mbụ Enyemaka na rụkwaa disk.
Ọ bụrụ na ị na-eji Windows eji Disk management Ọkpụkpọ na disk. Gaa Malite> kọmputa na rigt click na ya. Ị ga-ahụ Disk management n'okpuru Nchekwa.
Mata gị flash mbanye na igbunye ụzọ site na ịpị ịgbanwe Drive Letter na ụzọ. Gaa n'ihu ma nabata mgbanwe na-ekenye a akwụkwọ ozi gị flash mbanye. The akwụkwọ ozi kwesịrị n'etiti E na Z. akpatre pịa Ok ime mgbanwe nke ga-eme ka ọ readble na gị windows.
Mgbe na-eme otú ahụ na-eji Wondershare data Iweghachite nzọụkwụ tụlere tupu naghachi faịlụ na ya.
Ị hụrụ otú manụ na ọ pụrụ ịbụ mgbe gị flash mbanye ada ada you.it bụ mere ihe dị mkpa iji chebe gị faịlụ site na-rụrụ arụ ebe a na-isi Atụmatụ.
1. zere ibute gị flash mbanye ka ikpo oyi ma ọ bụ mmiri.
2. Always hụ na gị na flash mbanye a na-emechi nke ọma ma na gbochie ya ọ bụla anụ ahụ mebiri.
3. Always idaputa gị flash erite n'enweghị mgbe unu ugwu na kọmputa gị.
4. Unu na-eji otu flash mbanye ruo ogologo oge. Gbalịa na-eme ya.
5. Wụnye mgbochi nje omume na ngwaọrụ gị.
> Resource> Flash Drive> Olee ịzọpụta gị Dị Oké Mkpa faịlụ site na a rụrụ arụ Flash Drive